Oovimba bePolkadot - Iphepha 2 le-5
I-Polkadot (DOT) ibuyisela ngaphezulu kwe-34 yeedola yenkxaso, inokuthi iqhubeke kwakhona iye phezulu
Ixabiso lePolkadot (DOT) ubuyile waya ezantsi kwi-33 yeedola. Kukwakho nezibane zezibane ezongeziweyo ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 33. Kwakhona, ixabiso le-crypto lingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo ebonisa ukuba ukubuyisela kwakhona kunokuphela kwaye ukunyuka okuphezulu kunokwenzeka. Kwintshukumo yexabiso elidlulileyo, abathengi batyhala i-altcoin kwindawo yokumelana ne- $ 40 kodwa bagxothwa. Namhlanje, abathengi bayabuya ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 33 yokunyuka.
I-crypto ikwinqanaba lama-57 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Le ngqekembe ikummandla ophakamileyo kwaye iyakwazi ukubuyela phezulu. Imivalo yamaxabiso e-DOT / USD ingaphezulu kweentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iPolkadot kukuhla usihla. I-altcoin ibuyele kumgangatho ophantsi wama-33 eedola. Okwangoku, ngoSeptemba 16 ezantsi; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liza kuwela kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye kwinqanaba leedola ezingama-29.71. Ukusuka kwintsebenzo yexabiso, intengiso yehla yaya kuthi ga kwiidola ezingama-33 yaza yaqala phezulu.
I-altcoin ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
IPolkadot kukuhla okuye ezantsi. I-altcoin ibuyile yaya kwi-33 yeedola esezantsi kwaye yaqala kwakhona ukunyuka phezulu. I-crypto kusenokwenzeka ukuba iphinde iqhubeke kwakhona ukuze iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iswelezwe kwi-Intanethi. I-DOT / i-USD ithengisa nge- $ 34 ngexesha lokubhala.
IPolkadot (DOT) iyehla njengeenkunzi zeenkomo zisilele ukoyisa i- $ 30 ephezulu
Emva kokophuka kutshanje, Ipolka dot zilungiswe ngaphezulu ukuya kwi- $ 32.66. Kuphezulu nje kutshanje, i-altcoin yajongana nokunye ukwaliwa. Oku kubangele ukuba i-altcoin iwele ezantsi kwi-28.13 yeedola. Ukusuka kumaxabiso entengo, uxinzelelo lokuthengisa kunokwenzeka ukuba luqhubeke kwicala elisezantsi.
Ixabiso le-DOT likwinqanaba lama-52 laMandla oMbane aMandla aMandla exesha le-14. Ibonisa ukuba i-altcoin ikummandla we-uptrend kwaye iyakwazi ukunyuka ngaphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihamba ziye phezulu zibonisa imeko. Amaxabiso e-crypto angaphantsi kweentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA eziphakamisa ukuwa okunokwenzeka.
Kwitshathi yeyure e-1, iPolkadot luluhla olusezantsi. Uxinzelelo lokuthengisa luqala kwakhona emva kokuba ingqekembe igxothiwe kwinqanaba lama-32. Okwangoku, ngoSeptemba 10 downtrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liza kuwela kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le- $ 25.83.
IPolkadot ingaphezulu kwenqanaba lama-25% le-stochastic yemihla ngemihla. Ingqekembe ikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
IPolkadot kukuhla okuye ezantsi. Abathengi bazama ukutyhala amaxabiso ngaphezulu kodwa bajongene nenye ukwaliwa kwi-30 yeedola. Ukuba i-altcoin ijongene nokwaliwa kwimakethi iya kufikelela kwi-25 ephantsi. Ngaphandle koko, imali iya kubanjwa phakathi kwe- $ 25 kunye ne-30
IPolkadot (i-DOT) ikwiNgingqi e-Overbought, ukwaliwa kobuso kwi-34 yeedola
Ukuhlaziywa: 4 Septemba 2021
IPolkadot (DOT) Uhlanganisene ne-34 yeedola yokuchasana kodwa akakwazanga ukugcina ngaphezulu kwayo. Nge-1 kaSeptemba, abathengi baphinde baliphinda kwakhona inqanaba lokumelana nokuthenga batyhalwa. Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo, ixabiso le-DOT belisokola phantsi kwenqanaba lokumelana. Ukuqhubela phambili ukuya phezulu akunakulindeleka njengoko iPolkadot ifikelela kwindawo ethe kratya. Ngeli xesha, ngo-Agasti 21 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liza kunyuka kodwa libuyele kwi-1.272 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba leedola ezingama-34.10.
Ixabiso le-DOT likwinqanaba lama-71 le-Index ye-Relative Strength Index 14. I-altcoin ifikelele kummandla othengiweyo wentengiso. Ixabiso le-DOT lingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Kwakhona, i-stochastic ibonakalisile imeko egqithisileyo yengqekembe. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihamba ziye phezulu zibonisa imeko.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iPolkadot iphinde yaqala ukuya phezulu. Abathengi baqhekeze ukuxhathisa nge-32 yeedola. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOT iya kunyuka iye kwinqanaba le-31 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba leedola ezingama-78.6.
IPolkadot ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-crypto iyarhweba kwingingqi ethengwe ngaphezulu kwintengiso. I-crypto ikwi-bullish umfutho. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
I-DOT / i-USD iphinde yaqala ukuya phezulu. I-uptrend ijongene nokwaliwa kwinqanaba lokumelana ne-34. Imarike kulindeleke ukuba iwe njengoko abathengisi bevela kwindawo ethengwe kakhulu. Ngokwe-Relative Strength Index, ixabiso le-DOT alinandawo yokuhlangana phezulu.